Eminyakeni yamuva, abadlala babone impela eningi amaphrojekthi indie, kodwa abanye babo base bekwazi ngempela zikhunjulwe. It has a enengqondo - yokuthi ukuthola iinsetjenziswa ukuvumela ukudala umdlalo nge-pixel elingu ihluzo ku injini khulula, babe cishe wonke umuntu. Ngakho abantu abaningi frenetically bagxuma best embonini namuhla. Noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi umdlalo ikhompyutha - akusiwona nje lezimpahla, okungase wanyathela, futhi kuyokulethela inzuzo. Ingabe imidlalo abe umphefumulo, futhi uma unganikezi kuphrojekthi ayo, akunakwenzeka ukuba uphumelele, ngoba balahlekelwa phakathi namakhulu abanye okufanayo imidlalo isilinganiso. Njengoba isibonelo esihle iphrojekthi indie, ungathatha umdlalo I Escapists. Mayelana-ke ungasho khona eziningi, kodwa yagxila lesi sihloko kuyoba kanjani ukulwa I Escapists.
Ngakho, ngaphambi kokuba ubhekane kanjani ukulwa I Escapists, kudingeka uqonde ukuthi yini lo mdlalo. Kuyo sifeze indima kwesiboshwa, ogama njongo - ukubaleka ejele. Eqinisweni, le Simulator ejele - ulapha zifezeke amacala abo emisebenzini ehlukahlukene okuyinto zikhokhelwa ngezindlela ezahlukene, spare time sakho, ungakwazi ukuxhumana nezinye iziboshwa, ukuthatha imisebenzi yabo futhi nizenze, akhishwa, nokunye. Ngakho, umgomo wakho oyinhloko - kuyinto ukubaleka, kodwa kube nzima kakhulu, ngakho kufanele ucabangele eziningi imininingwane kahle ukulungiselela eqile. Futhi into yokuqala okudingeka ukwazi - kunjani ukulwa I Escapists.
Impi e umdlalo
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into kumele kube silula - kulotshiwe imiyalelo ulwa udinga chofoza ibha yesikhala. Nokho, abadlali abaningi akakwazi ukubhekana nale nqubo, ngakho ubuze imibuzo mayelana nendlela yokulwa kuyi Escapists. Empeleni uhlelo kancane nzima kungase kubonakale efika kuqala, ngoba ukhiye oyedwa ngeke uthole lapha. Space - kuyisihluthulelo ukuthi unesibopho yokuthi isikhombisi sakho izinguquko umhlaseli, okungukuthi, ukushintsha ukuma nombala wazo. Ngemva kwalokho, uzodinga ukuba sisondelane naye umuntu uya ukuhlasela, bese uchofoza kuso ehlasela isikhombisi. Ngokushesha ngemva kwalokho, ingxabano, ngakho okuqala sidinga ukucabangela ukuthi amacebo bese ubona ukuthi udinga okwamanje ukuba angenele impi ethize. Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukulwa kule mdlalo I Escapists, kodwa ezinye okhiye ngeke kwanele.
Uma ufuna ukwazi nje kuphela indlela ukulwa kule mdlalo I Escapists, kodwa nokuthi ukwenze kanjani ukunqoba lezi izimpi, kufanele sinake isihloko ukuthi has uhlamvu lwakho. It has izici ezintathu eziyisisekelo - amandla, lobubhalo, kanye nezobunhloli. Bonke kuzokusiza ekuphileni kwansuku zonke futhi empini. Uma ufuna ukumpompa amandla, udinga ukuya ejimini futhi nokuphakamisa izinsimbi lapho. Uma usukhathele, ungashintsha ukuthi ukuqeqeshwa lobubhalo, okungase kwenziwe yonke endaweni efanayo, kodwa kakade phezu treadmill. Kodwa ukukhalipha okuthuthukiswa kokufunda incwadi ukusebenzisa i-computer - futhi ezincwadi, futhi PC ingatholakala umtapo. Nokho, ukuphathwa I Escapists ibika ukuthi kukhona isici sesine ngokuthi "Isimo sengqondo". Luphinde kubaluleke kakhulu ngawe mpi, futhi ekuphileni kwansuku zonke.
Isimo Sengqondo futhi iqoqo lezigilamkhuba yangasese
Attitude - kuyikhono ukuthi kuyoba esiyingqayizivele kuwe ngamunye weziboshwa etilongweni. Ekuqaleni, zonke eziyingxenye yazo ongachemile, kodwa ungashintsha lokhu ngokwenza izenzo ezithile. Kuye wenzani zizoshintsha isimo sengqondo uhlamvu bebheke ungcono noma kukubi kakhulu, ngokulandelana. Izitha zakho - nakulabo wena ubudlelwane ichithekile, bona eyakubusa phezu kwenu: bethukuthele futhi akazange miss ithuba lokuhlasela kwakho. Ngesikhathi esifanayo ungakwazi evunyelwe nasekusakazeni izipho ukukhulisa umbono yena nabanye, futhi uma umuntu siphakeme ngokwanele, ungakwazi zicela ukuthi umuntu ejele yayo lezigelekeqe. Ngosizo yesigejana ongayithola inzuzo empini, ngakho musa phansi amandla ukuhlaselwa iqembu. Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukuthatha lezigelekeqe ku-bot I Escapists, - salokhu udinga nje ukwenza kube ukuthi zihlobane kakhulu nawe kanye ngangokunokwenzeka, khona-ke uyoba ngaphandle umbuzo inamathele ukulwa eceleni kwenu.
Umgomo wakho oyinhloko kule game - ukuze aphume ejele. Futhi lapha akekho obakhathalela indlela yokukwenza. Ungaba isiboshwa imodeli, ukuvakashela zonke izinyathelo ezidingekile ukuze bakwazi ukuphuma ngokushesha ngangokunokwenzeka, kodwa le ndlela akunakwenzeka ukuba siphumelele. Ngakho-ke, kudingeka alwe ngendlela labo lenkululeko ngempoqo. Assailed ngu nezitha ezinamandla ukulwa, ukuqoqa umbimbi onokwethenjelwa futhi ukuya empini ngenxa inkululeko. Endleleni, wena ngisho kufanele silwe ne amaphoyisa, ngakho uzowathola ngcono isexwayiso, umbimbi okuthembekile, kanye intuthuko eqhubekayo futhi ekhiphela izibalo zakho ukuze ukwazi ukunqoba noma isiphi isitha.
Indlela usethe lowo mbukwane CS: GO nge console?